Episode 32: ကချင်စစ်ပြေးကလေးငယ်တွေအတွက် ပညာရေး (ကချင်ဘာသာ)
Ngwipyaw ai rai u ga.Doh Athan bat shagu na podcast lamang kaw na kabu gara shakram dat ai.
သုံးပွင့်ဆိုင် နားလည်မှု စာချွန်လွှာအရ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းသို့ ကုလသမဂ္ဂအား ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် မြန်မာသဘောတူ
ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ရောက် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလနှင့် မြန်မာကြား လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည့် နားလည်မှုစာချွန် (MoU) အရ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ကုလသမဂ္ဂအား ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန် မြန်မာအစိုးရက သဘောတူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိတစ်ဦးက Frontier ကို ဇွန် ၆ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားသည်။
ကုမ္ပဏီဥပဒေသစ်က စီးပွားရေး အခင်းအကျင်းကို ပြောင်းလဲသွားစေမည် – ဒုသမ္မတ
သော်မတ်စ် ကင်းန် သြဂုတ် ၁ ရက်နေ့တွင် အာဏာသက်ရောက်လာတော့မည့် ကုမ္ပဏီဥပဒေသစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အခင်းအကျင်းကို ပြောင်းလဲသွားစေလိမ့်မည်ဟု ဒု-သမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများမှ အကြီးအကဲများကို ပြောကြားသည်။ ဇွန် ၆ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သော မြန်မာ-အီးယူ စီးပွားရေးဖိုရမ်တွင် အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌.
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာကို လုံခြုံကောင်စီ ပြောကြား
ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ရက်စက်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဆိုသည့် စွပ်စွဲချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမည့် ကုလသမဂ္ဂ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာအစိုးရကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက တောင်းဆိုနေကြောင်း ဇွန် ၅ ရက်နေ့တွင် အေအက်ဖ်ပီက ဖတ်ရှုခွင့် ရရှိခဲ့သည့် စာတစ်စောင်၌ ဖော်ပြထားသည်
Episode 32: ကချင်စစ်ပြေးကလေးငယ်တွေအတွက် ပညာရေး
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ဒို့အသံ အစီအစဉ်မှာ အပိုင်း(၂)ပိုင်းခွဲကာ ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။